Huawei ji 50% kwalite ahịa ya na nkeji iri na ise | Gam akporosis
Fewbọchị ole na ole gara aga ka ekpughere ya Sony abanyela aka n'ahịa ya kacha njọ na nkeji iri na ise nke afọ. Na mgbakwunye, Samsung amalitebeghị afọ na ụkwụ aka nri, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ Korea ewepụtala ụfọdụ ezigbo nsonaazụ. A ghaghi itinye nke a na mbelata ahia, nke na eme ka ulo oru nwere obi ojoo. Ọnọdụ ahụ dị nnọọ iche na Huawei, nke malitere afọ ahụ nke ọma.
Onye nrụpụta China mechiri nkeji iri na ise nke afọ a na mmụba ama ama na ahịa. N'ụzọ dị otú a, Huawei na-aga n'ihu na otu omume dịka afọ gara aga, nke mechiri ọnụ ahịa ahịa nke 37%. Gịnị na-eme ka ha na-abịarukwu Samsung nso n’ahịa.
Izu ole na ole gara aga, enweelarị ikwu na ire ahịa nke akara ndị China amụbawo site na 50%, dị ka ụlọ ọrụ ahụ na-ekwurịta okwu. Ugbu a, anyị nwere ọnụ ọgụgụ ahịa ziri ezi maka Huawei, na mgbakwunye na ụdị ndị ọzọ. Ekele dịrị ha, anyị nwere ike ịhụ ọhụụ dị ịtụnanya nke akara ndị China jisiri ike mee n'ahịa.
1 Huawei na-akwado na nke abụọ
2 Huawei na-abawanye ahịa ya
Huawei na-akwado na nke abụọ
N'afọ gara aga, Huawei jisiri ike gafee Apple dị ka onye nrụpụta ahịa abụọ kachasị mma n'ụwa. Ihe a na-emeghachi ọzọ, na-eme ka o doo anya na ika ahụ emeworị onwe ya n'ọnọdụ a. Samsung bụ onye ndu ahịa, na oke ahia nke 23,1%, obu ezie na ha efunari ala ha ma oburu na ha jiri ya tụnyere afo gara aga. Ihe nke ika ndi China nwere ike jiri, ugbua nwere uzo ahia nke 19%, na-abiaru nso.
N'ụzọ dị otú a, Apple na-arịwanye elu na Huawei. Ahịa ndị America nwere afọ ojuju na ọnọdụ nke atọ na nkeji nke mbụ a, ya na oke ahia nke 11,7%, nke na-anọchite anya mbelata pụtara ìhè ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga. Na mgbakwunye, n'ụzọ dị otú a, ụdị dịka Xiaomi, Vivo na OPPO, nke mechiri ndepụta ahụ, bịarukwuo nso.
Ihe na-adọrọ mmasị bụ na belụsọ Huawei na Vivo, ụdị ndị ọzọ emechiela nkeji iri na ise nke afọ na mbelata ahịa. Xiaomi enyefekwala ala, ọ bụ ezie na ọ bụ nke belata ntakịrị na ahịa. Kama nke ahụ, anyị nwere ikpe nke Apple, nke bụ nke daa ada kachasị. Ogbenye ndị ogbenye nke ọgbọ ọhụụ nke iPhone na-eme ka ika ahụ pụọ n'ọnọdụ nke abụọ na ahịa.
Huawei na-abawanye ahịa ya
Dị ka a kọrọ na izu ole na ole gara aga, ahịa Huawei agbawaala na nkeji iri na ise nke 2019. N'otu oge ahụ n'afọ gara aga, njem ndị China rere 39,3 nde ekwentị zuru ụwa ọnụ. Ahịa nke ha nọrọ n'ọnọdụ nke atọ n'ahịa. Otu afọ mgbe nke ahụ gasịrị ọnọdụ agbanweela, ebe ọ bụ na ha ejiri 59,1 nde ekwentị mechie ugbu a rere, dị ka akara nke abụọ.
Tụkwasị na nke ahụ, anya ya dị anya site na Samsung dị ntakịrị. N'afọ gara aga, akara Korea rere 78,2 nde ekwentị na nkeji mbụ a. Mgbe na 2019 ahịa ya adabala na nde ekwentị 71,9. Ọ bụ ntakịrị ntakịrị, mana ọ na-egosi na ha enyela ala ụfọdụ n'ahịa na nke a. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya emeelarị ka o doo anya na ha na-atụ anya inwe mmụba na ahịa na nkeji nke abụọ.
Ọ ga-atọ gị ụtọ ịhụ otú ahịa si agbanwe na ọnwa ndị na-abịanụ. Huawei ekwuola na n'etiti 2019 na 2020 nwere ike bụrụrịrị ndị isi ahịa nke telephony. Mgbe Samsung na-ekwusi ike na ọ bụ ha ga-abụ ndị isi, ọbụna n'ime afọ 10 sochirinụ. Ya mere agha iji nweta ọnọdụ mbụ n'ahịa ahụ na-ekwe nkwa ịgba mgba. Anyị ga-ahụ ihe na-eme na nkeji nke abụọ nke afọ a. Karịsịa ugbu a na oke abụọ ahụ, P30 na Galaxy S10, adịworị ire ere n'ụwa niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Ahịa Huawei rịrị elu na nkeji iri na ise